Bazoba senkangeni abebela iPhalamende izipuni nezinkomisi kwi-Sona | News24
Bazoba senkangeni abebela iPhalamende izipuni nezinkomisi kwi-Sona
Johannesburg - IPhalamende lizochitha izindodla zezimali kwezokuphepha uma sekuqhubeka iState of the Nation Address (Sona) ngenhloso yokugwema izivakashi ekutheni zebe izinkomishi, izipuni namapuleti.
“Silahlekelwa yimpahla eningi,” kusho ibamba likaNobhla Jikelele ePhalamende uBay Tyawa ngemuva kokuba amaqembu aphikisayo ekhale ngokwengezwa konogada uma sekuqhubeka inkulumo ebhekiswe esizweni okulindeleke ukuba yethulwe nguMengameli Jacob Zuma ngomhlaka-8 Febhuwari.
OLUNYE UDABA:SONA: Buka okuqhubeka ePhalamende
Ekhuluma eKempton Park, eKurhuleni, izolo ngesikhathi kuqhubeka ingxoxo ngokubuyekezwa kwemithetho ePhalamende, uTyawa ukucacisile ukuthi iPhalamende lifuna ukuqapha impahla.
Uphinde wathi kunezinhlelo zokuthi kufakwe amakhamera ngaphakathi nangaphandle kwasePhalamende.
USomlomo wePhalamende, uBaleka Mbete, uthe iPhalamende lizama ukulungisa okungahambi kahle.